Realme GT - Tijaabo qoto dheer oo kamarad ah | Androidsis
Realme GT - Tijaabo qoto dheer oo kamarad ah
Realme baabtiisay tan Realme GT oo aan markaas ku tusnay Daahfurka "dilaaga calanka", si kastaba ha noqotee, si looga takhaluso boosteejooyinka qaaliga ah ee safafka sare, waxaa lagama maarmaan ah in la helo kaamiro iswaafajiya. kaamirada ayaa si sax ah u ah mid ka mid ah meelaha terminal-yada qaaliga ah ay ka muuqdaan kuwa ka "qaalisan".
Waxaan si qoto dheer u falanqeynay kamaradda Realme GT-da cusub si aan u go'aamino haddii ay runti awood u leedahay inay iska dhex dhigto boosteejooyinka dhamaadka-sare ee ay damacsan tahay inay ka adkaato. Nala joog oo soo hel dhammaan faahfaahinta kamaradda Realme GT.
Sida had iyo jeer ah, waxaan kugula talineynaa inaad marka hore dhex marto fiidiyowgeena halka ugu sarreysa oo aan ku falanqeynay si faahfaahsan labadaba kaamirada codsiyada Realme gt sida clips yar oo aan xitaa ku daawan doono duubista fiidiyaha. Ka faa'iideyso fursad aad ku qorto kanaalkayaga oo aad uga caawiso bulshada Androidsis guud ahaan inay sii wadaan inay koraan. Sidan ayaan ku sii wadi karnaa inaan kuu soo qaadno waxa ugu fiican, falanqaynta ugu fiican iyo wixii ka sarreeya dhammaan talooyinka badan si aad uga faa'iideysato Android-kaaga.
1 Astaamaha farsamada ee Realme GT
2 Barnaamijka kamaradaha Realme GT
3 Imtixaanka kamaradda
Astaamaha farsamada ee Realme GT
Mabda 'ahaan waxaan qaadaneynaa daqiiqad si aan u jaleecno dhamaan astaamaha farsamo guud ahaan Realme GT, halkaasoo processor-keeda awooda badan uu ka muuqdo. Sidoo kale, waxaad arki kartaa gorfaynta qotoda dheer ee aan dhowaan qabanay.
Faahfaahinta farsamada Realme GT
Nidaamka hawlgalka Android 11 + Realme UI 2.0
Screen SuperAMOLED 6.43 "FHD + (2400 * 1080) oo leh heerka cusbooneysiinta 120 Hz iyo 1000 nits
Gacaliye Qualcomm Snapdragon 888 5G
Kaamirada gadaal Sony 64MP f / 1.8 IMX682 + 8MP UGA 119º f / 2.3 + 2MP Macro f / 2.4
Kaamirada hore 16MP f / 2.5 GA 78º
Xuduudaha kala duwan Bluetooth 5.0 - 5G DualSIM- WiFi 6 - NFC - IR - GPS Labaad
Batariga 4.500 mAh oo leh Eedeyn Degdeg ah 65W
Barnaamijka kamaradaha Realme GT
Waa inaan ku bilownaa guriga aasaaska, iyo inaan awoodno inaan sawirro fiican ka qaadno waxa ugu horreeya ee aan u baahanahay waa si toos ah codsi kamarad ah. Codsiga Realme UI 2.0 waa mid fudud oo lama huraan ah wuxuu na xusuusinayaa midka ay bixiyaan waxyaabo kale oo ka qoto dheer sida Apple oo ku jirta iOS iyo kamarada Xiaomi. Si kastaba ha noqotee, tani waxay u egtahay mid xoogaa adag. Waxqabadka waa mid xawli ku socda oo kala-guurka u dhexeeya dareemayaasha kala duwan waa wanaagsan yahay oo dhakhso badan, wax dhibaato ah kama aanan helin arrintan.
Taasi waxay tiri, arjiga waxay bixisaa waxqabad guud oo wanaagsan, sida had iyo jeer ku dhacda Realme UI 2.0 sidaa darteed wax cabasho ah kama qaban karno arrintaas. Isku xirku wuxuu la socdaa tallaalka degdegga ah iyo howlaha ugu muhiimsan ee loo baahan yahay iyo kuwa guud ayaa aad ugu dhow farta.
Waxaan ku bilaabaynaa dareenka ugu weyn, si gaar ah si gaar ah Sony IMX682 oo leh 64MP iyo aperture f / 1.9 oo ka kooban lix qaybood. Dareemahan 'Sony' waa mid la caddeeyay oo wuxuu si sax ah u bixiyaa natiijada aad ka filan lahayd. In kasta oo lagu dhawaaqayo 64MP xaqiiqda ayaa ah in sawirrada sawir qaadista ah lagu qaado "xallinta" aad uga hooseysa, in kastoo aan dooran karno tallaalka 64MP ee laga heli karo codsiga kamaradda Realme UI 2.0.
Kaamiradu si fiican ayey u qabataa tallaalada noocyadeeda kala duwan, xitaa habeenkii. Kuma dhibtoodo isbarbardhigyada waxaanan helnaa natiijooyin si wanaagsan loo qeexay oo xitaa aan dhihi lahaa soohdinta natiijooyinka kamaradaha waaweyn ee boosteejooyinka aad uga qaalisan. Tallaalka ayaa laga yaabaa inuu xoogaa mugdi yahay laakiin muujinta midabku ka maqan yahay xoogaa heer sare ah, si kastaba ha noqotee, tani way ka farxisaa isticmaaleyaal badan waxayna ka dhigaysaa guddiga SuperAMOLED inuu u muuqdo mid wanaagsan. Waxaa lagugula talinayaa inaad sawirrada ku qaadatid qaabka HDR ee ku shaqeysan qaab otomaatig ah, waxaan heli doonnaa natiijooyin wanaagsan waxaanna iska ilaalin doonnaa cirka da 'walba.
Waxaan hadda ku sii wadaynaa 8MP Ultra Wide Angle sensor oo leh f / 2.3 furitaan shan qaybood ah oo leh suurtagalnimada in lagu soo qaado waxyaabaha ilaa 119º. Natiijadu waxay bilaabmaysaa inay si muuqata u dhacdo, gaar ahaan marka la barbar dhigo dareemaha weyn. Iyadoo ay taasi jirto, ka-goysyada dhinacyada muraayadaha 'Ultra Wide Angle lenses' aad ayaa loo saxay, Dhadhanka dhadhanka qadhaadh ee guud ahaan waxay naga tagi doontaa xagalkan ballaadhan ee Ultra kaas oo bilaabaya inuu ku xanuunsado waxyaabo badan oo leh isbarbardhiga nalalka iyo gaar ahaan xitaa maqnaanshaha yar ee iftiinka. Halkan waxaan la kulannaa xusuusinta ugu horreysa ee ah inaanan wajahaynin terminal-dhamaadka sare, gaar ahaan natiijada wanaagsan ee dareemayaasha muhiimka ah.
Waxaan isku aragnaa isku dheelitirnaan dheeri ah oo dib-u-shaqeeyn ah ka dib taasoo keeneysa dareen ah "biyo-biyo", horeyna waan u ogaanay waxa ay tan macnaheedu tahay: Waxaan ku sifeynaa qeexitaan aad uyar sawirka Si kastaba ha noqotee, iyadoo la adeegsanayo "qaabka habeenkii" sawirku wuxuu umuuqdaa inuu u shidan yahay sidii si sixir ah markii loo qaadanayay tallaalada. Si kastaba ha noqotee, markaan qaadno qabashada oo aan ku dhajino sawirka waxaan si dhakhso leh u ogaanay inay ku dhowdahay gebi ahaanba qeexitaan la'aan iyo xaddiga buuqku aad ayuu u sarreeyaa.
Waxaan ku sii wadaynaa 2MP Macro Sensor oo leh seddex qaybood f / 2.4 aperture loogu talagalay in ay marka hore naga caawiso waxyaabaha sida xad dhaafka ah isugu dhow. Dareemuhu wuxuu bixiyaa natiijooyin aad u liita oo ka hooseeya iftiinka xun ama xaaladaha ka soo horjeedka. Dhinaca kale, waxaan leenahay a Zoom dijitaal ah oo leh laba jeer iyo shan jeer. Labada-weyneyn ayaa ka faa'iideysanaya dareemaha ugu weyn natiijaduna waa mid si heer sare ah u wanaagsan, halka midka shan-weyneynta ah uu durba diidayo nooc kasta oo ka mid ah waxyaalaha ayna ka dhigeyso mid aad u adag in la qaato xasiloonida darteed
Waxaan toos u aadnaa kamaradda Selfie, a 16MP frecklele oo leh f / 2.5 aperture oo ku yaal muraayadaha Wide Angle oo awood u leh inuu soo jiito nuxurka 78º. Waxay bixisaa natiijo wanaagsan xitaa isbarbar dhiga waxayna xitaa noo oggolaan doontaa inaan hagaajino Qaabka Sawirka iyo qaabka Quruxda. Iyada oo ay taasi jirto, waxaan haynaa natiijooyin xad dhaaf ah oo dib loo farsameeyay, sida caadiyan ku dhacda noocan ah boosteejooyinka. Wax aan xitaa isku mashquulin in aan mar dambe la dagaallano.
Kaamirooyinka ayaa awood u leh inay duubaan 4K qaraarada ilaa 60 FPS waxaana kugula talineynaa inaad fiiriso fiidiyowga aan ku hayno qaybta sare si aan u aragno sida ay u qabanayaan. Waxaan haynaa xasilin aad u wanaagsan oo ku jirta muraayada weyn iyo natiijooyin isku mid ah kuwa sawirada leh ee inta kale ee dareemayaasha ah, halkaasoo aan si toos ah uga shaqeyno muraayadaha indhaha 'Macro lens'.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Reviews » Realme GT - Tijaabo qoto dheer oo kamarad ah